Date My Pet » The 5 Big Dating fahadisoana ny vehivavy ho
The 5 Big Dating fahadisoana ny vehivavy ho
Last nohavaozina: Jan. 13 2021 | 5 min namaky
Moa ve ianao manana fotoana ratsy ny fanadinana ny mampiaraka?
Ve ianao mba handeha toa maro ny daty sy ny miresaka amin'ny olona betsaka amin'ny aterineto nefa toa tsy hanao fifandraisana na hihaona ny olona?
Raha izany dia azo inoana fa ianareo kosa manao ny iray na mihoatra ny '5 Big Dating fahadisoana'. Eto dia ny 5 Big Dating fahadisoana fa ny vehivavy manao, ary inona no tokony hatao fa.
1. Fomba Mampiaraka Amin'ny An Agenda
Maro ny vehivavy miaraka amin'ny mpanjifa ny hanatonan'izy ireo fandaharam-potoana ary tena miasa aminy sy ny fahombiazana amin'ny mampiaraka. Izy ireo mitady ny olona, ary raha tsy mahita azy na inona na inona niaraka tamin'izay ny olona izay mifandray aminy ny olona voaroaka vokany avy hatrany ka voasoratra raha tsy ny vintana ny daty hafa mba hijery ny fifandraisana (na tsy aminy) bebe kokoa. Ary raha ataony mahazo ny daty sehatra, ny vehivavy mitondra izany fandaharam-potoana ny daty sy ny latsaky ny vokatra mahafa-po.
Dia toa zavatra tokony antenaina ny hoe tsy manana fandaharam-potoana, rehefa niaraka, rehefa tokoa rehetra ny antony rehetra miaraka dia ny hihaona 'ny olona' tsara? Eny tsara ary tsy misy. Tamin 'ny farany, ary mandritra ny fotoana maharitra izany no fanirian'ny, na izany aza ianao mampihena tanteraka ny vintana ny mahazo izany raha ny hanatonan'izy ireo sehatra miaraka amin'ny fandaharam-potoana. Tamin'ny dingana izany eo amin'ny lalao dia tsara kokoa ny hijery mampiaraka ny zavatra izany - ho afaka hihaona sy ho manodidina mpikambana ao amin'ny ankizilahy na ankizivavy ny kafe, mandeha, Niady hevitra sy ny sisa. Avy amin'ny olona - IT fotsiny daty - tsy misy fampakaram-bady resadresaka, ka aoka ny miala voly kely sy hihazona izany ho toy izany. Dia toy izany tsy azo fomba fijery mba manantena fa afaka mahafantatra raha olona iray no Vadinao avy amin'ny fivoriana iray ao amin'ny solon-toerana.
Raha fantatrao ny fomba niaraka ny vehivavy dia ho fantatrao I Manoro hevitra niaraka toy ny fitsaboana fa nanamboatra fomba fifandraisana ratsy. Mihoatra noho izany aza mampiaraka izany dia natao ho mahafinaritra sy mazava fo. Raha mandeha amin'ny fandaharam-potoana momba ny fitadiavana avy raha izany lehilahy izany no ataony iray taonina ny tsindry avokoa ny zava-misy, ary izany dia midika fa tsy ianao na ny daty dia ho afaka haka aina sy hankafy ny fanandramana. Dia tsy afaka ny ho tena tsara indrindra, ary tsy ho izy. Mitete ny fandaharam-potoana izany, ary manao iray vaovao - ny manana vaovao, Mahafinaritra sy mazava fo traikefa amin'ny olona vaovao.
2. Hanapaka Men Out Too Vetivety
Toy ny amin'ny fahadisoana lehibe indrindra amin'ny voalohany, fahadisoana 2 fomba iray hafa ny vehivavy hitifitra nitokana teny an-tongotra rehefa niaraka. Tandrefana maro ny vehivavy eo amin'ny fiaraha-monina amin'izao fotoana izao dia nitondra ny 'simika' tsapany rehefa manao ny safidy amin'ny olona, ary hitako izao mahazo azy ho eo an fahoriana isan-karazany ny fotoana sy ny fotoana indray. Simia mazàna ny ho famantarana mahantra raha mba misy lehilahy ho mpiara-miasa tsara ho anao. Raha ny marina dia matetika simia mafy Fampitandremana ho an'ny vehivavy izay tsy nanao safidy fifandraisana lehibe tany aloha. Matetika ny olona tsara afaka tanteraka odian-tsy hita, satria natahotra izy ireo sady hafahafa tamin'io daty voalohany ary tsy entana ny totohondriny tao amin'ny sampan-draharahan'ny simika. Ho an'ny vehivavy dia afaka mitombo mahasarika ny fotoana amin'ny olona tsara. Ka hanome ny olona hafahafa na mangina fahafahana hafa, Raha ny marina hanome azy fohy maro daty ary jereo raha tsy avy ao an-akorany ho anareo sy hiverina ho tsara tarehy ny olona, angamba na dia 'ny olona'. Aza manahy mikasika ny raha azonao an-tsaina fa izao ankehitriny izao (jereo ny fahadisoana 1).
3. Manatona ny Date Amin'ny A lisitra
Fahadisoana 3 dia mitovy amin'ny fahadisoana 1 ary toy ny manimba, raha tsy ratsy. Fantatro fa maro ny vehivavy manana ny trusty 'lisitra' ny toetra izay tiany (na mieritreritra izy ireo te-) amin'ny olona. Tsy misy maha ratsy ny fahazoana mazava tsara ny zavatra tianao eo amin'ny mpiara-miasa vehivavy tonga lafatra, na izany aza ny mahazo aoka ho zava-misy miaraka amin'ny lisitra, satria ny sasany amin'izy ireo no tena misy dikany sy tsy manompo anao mihitsy!
Ny lisitra lava dia lava, ary matetika dia matetika manana ny zavatra misy fa raha ny marina amin'ny fifandonana amin'ny tenany! Ohatra dia mety ho 'tony sy nametraka indray' tsara akaikin'ny 'mpankafy sy natanjaka'. Ankehitriny aho dia tsy nilaza fa ianao tsy afaka ny hanana ireo toetra ao amin'ny olona iray, izany fotsiny fa ara-dalàna ny olona iray mazàna mankany amin'ny hafa. Ka izay no? Indraindray koa ny lisitra manana zavatra izay tena misy dikany, toy ny 'tombokavatsa' na 'hozatra'. Avy amin'ny vehivavy! Tsy misy na inona na inona ratsy amin'ny fananana ara-batana, fa ianao tiany tokoa ve ny mifidy ny mpiara-miasa ao amin'ny fiainanao raha manana ranomainty teo amin'ny vatany? Heverinao ve fa izany no hitondra anareo ny tsara indrindra ny amin'ny ainareo fifandraisana? Ahoana ny momba ny toetra tena olana, toy ny fanaovana ny marina, ny tsy fivadihana, hatsaram-panahy, hery (-tsaina) sy ny sisa?
Vehivavy tsirairay dia tsy maintsy manapa-kevitra izay no zava-dehibe ho azy. Na izany aza ny fotoana sy ny fotoana indray Efa hitako ny lisitra atao hariana, rehefa mihaona ny vehivavy tamin'ny farany ny fiainany mpiara-miasa, ary matetika samy hafa tanteraka ny olona nananany teo amin'ny lisitra! Ary izy no faly. Ka ny torohevitra - nandroaka ny lisitra! Na, raha izany dia tsy maintsy manana, kapao io ny ambony indrindra vao natao ny 5 toetra manan-danja indrindra. Ampiasao ho toy ny mpitari-dalana ankapobeny Tsy mason-tsivana.
4. Hanao ezaka be
Noho izany dia olona nihaona farany tianao, ianao dia avy eo amin'ny daty aminy ka matahotahotra ianao. Ka inona no atao? Miresaka. Raha misy hantsana eo amin'ny resaka anao hofenoiko. Soso-kevitra ianao izay haleha, dazzle azy ianao amin'ny tantara ny Adventures efa nanana, mampiseho azy ny mamirapiratra sy hampanompo azy ianao amin'ny zaitra, raha manao ny vazivazy. Ary mazava ho azy no manolotra ny vola noho ny antsasaky ny daty, na angamba ianao dia mahazo ny tolo-dalàna rehetra - ianao vehivavy maoderina rahateo. Ary izany no mitranga LEHIBE! Izy dia mihomehy miaraka aminao, ary misy fifandraisana, dia afaka mahatsapa izany. Fa, dia tsy miantso. Dia mandeha izy, ary manjavona mangatsiaka rehefa roa daty. Inona àry no tsy nety?
Tsara ny ankamaroan'ny olona tia ny handray anjara amin'ny lehilahy amin'ny mampiaraka, ary raha manao rehetra na ny ambony ianao raha ny marina manosika azy noho ny andraikitra ity, izay midika hoe ianao manakana azy tsy lasa vola pihetseham-po ao aminao. Ny mahasarika ny olona sy ny fanoloran-tena atao tripped fihetseham-po izy ireo rehefa voatery hametraka amin'ny ezaka sasany. Mety hieritreritra ianao hoe mahafatifaty sy mahafinaritra na izany aza dia tsy mahazo anao lavitra mandritra ny fotoana maharitra ny ankamaroan'ny olona. Dia ho afaka hankafy ny teto aminareo, mba mihomehy miaraka aminao, ary aza dia mety ho daty faharoa, na izany aza izy, dia azo inoana fa ho ratsy fiafara ny fanoloran-tena olon-kafa - iray hafa 'mafy kokoa' vehivavy izay no tsy maintsy nataony tao ezaka bebe kokoa.
Mila ho ny olona nitarika ny resaka, voly ianao ary nanolo-kevitra ny toerana. Raha te-hiteraka ny fihetseham-po lalina aoka izy hitarika sy mahereza ampy manaraka. Miala sasatra sy mampihatra rehefa tonga sy mankafy ny zava-nitranga fa tsy.
5. Aoka An Ice Maiden
Ny hoe ny ranomandry Atsimbadiho ny zazavavy no ilany ny miezaka mafy loatra. Ny vehivavy sasany mahafantatra momba ny fahadisoana maro 4 koa araka izany ny ento ho eo amin'ny hafa, ary lasa loatra tafahoatra manalavitra sy tamin '. Na dia mety ho nitadiavany 'sarotra ny mahita' sy 'sarobidy', raha lavitra loatra nalaina fomba izany dia afaka tonga eny fa tsy liana ianao, tamin ', unfriendly ary na dia snobby. Izany dia afaka mahatsapa ny hatsiaka kely ho maro ny olona, ary indrindra ny olona ho kivy tsara tarehy haingana tamin'ny tovovavy ranomandry, afa-tsy ireo izay liana fotsiny ny zava-tsarotra ny hividy, ary tsy mila izany karazana olona tahaka Azy mety handao anao indray mandeha ny katsaho tapitra ka mifindra ho amin'ny vehivavy hafa.
Tsy mila ho hampifandanja ny efa napetraka indray / mamela azy hitarika ary mbola ho liana sy misokatra. Raha afaka hahazo izany fandanjalanjana tsara ianao dia hanana fotoana lehibe amin'ny mampiaraka. Ny zava-dehibe indrindra ny hahatsiaro ho tena fotsiny. Mankanesa ao anatinao hoe tena matanjaka sy mahazo aina eo amin 'ny hoditra. Mampiaraka tena manampy anao amin'ny ity!
Ka mandehana miala any ary indrindra tsy mandray loatra niaraka manokana. Ianao tsy mahalala izay mitranga ho an'ny olona hafa. Hitondra izany toy ny mahafinaritra 'fanao' ary hataony ho anareo.
Dimy Online Dating Profile Fahadisoana Kely To Aza
Akanjo Fa A First Date
Inona no Sex Afaka Manampy Anao ny Hiaina fiainana tsara kokoa
Top 6 Antony Nahoana Cooking dia Hot ny Romance